आँधीखोला खवर | “नेपालमा पठन संस्कृति तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुँदै गयाे” : सुवेदी । - आँधीखोला खवर “नेपालमा पठन संस्कृति तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुँदै गयाे” : सुवेदी । - आँधीखोला खवर
“नेपालमा पठन संस्कृति तुलनात्मक रुपमा कमजोर हुँदै गयाे” : सुवेदी ।
गल्याङ् नगरपालिका वडा नम्वर ६ पिडिखोला स्थायी घर भएका कुलराज सुवेदी सरकारी सेवामा कार्यरत रहनु भएकाे छ । उहाँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अङ्ग्रेजी र समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर तथा कानुन विषयमा स्नातक अध्ययन गर्नु भएकाे छ । सुवेदीले बिरुवा गाउँपालिका स्याङ्जाकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा आफ्नाे जिम्मेवारी सम्हाली रहनु भएकाे छ । बेलाबेलामा पत्रपत्रिका तथा अनलाइनहरुमा लेख र रचना प्रकाशित गर्ने सुवेदीले साहित्य प्रति चासो पनि राख्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ आँधीखोला खवरका लागि राधाकृष्ण डुम्रेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नमस्ते ! यहाँलाई आँधीखोला खबर मा हार्दिक स्वागत छ ।
नमस्ते , धन्यवाद ।
कत्तिको फुर्सदिलो हुनुहुन्छ ?
कार्यालय समय बाहेक फुर्सदिलो नै छु । गत शुक्रबार सम्म जापानिज विश्वविद्यालयको एउटा ५ हप्ते अनलाइन कोर्स लिँदै थिए । तत्पश्चात अलिक फुर्सदिलो भएको छु ।
फुर्सद को समयमा के गर्नुहुन्छ ?
नया ठाउँहरू घुम्ने , पुस्तक र पत्रपत्रिका पढ्ने तथा संगीत सुन्ने मेरा बानीहरु हुन ।
अहिले के पढ्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले हर्क गुरुङ को विषय विविध भन्ने पुस्तक पढ्दै छु । गुरुङका पुस्तक हरु खोजमूलक र तथ्यमा आधारित हुन्छन् । भूगोल , भाषासंस्कृती ,वातावरण तथा राजनीतिसँग सम्बन्धित आलेखहरु समेटिएको यो पुस्तक अत्यन्त रोचक तथा ज्ञानवर्धक छ ।
तपाईंलाई मन पर्ने लेखकहरु को को हुन् ?
नेपालीमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा , बिपी कोइराला , गुरूप्रसाद मैनाली , पारिजात, नयनराज पाण्डेको पुस्तकहरु मन पर्दछ । विदेशी लेखक हरुमा खालिद हुसेन , पाउलो कोहेलो , अर्नेस्ट हेमिङवे , रवीन्द्रनाथ टैगोर र शरदचन्द्र चटोपाध्याए मन पर्दछ ।
उत्कृष्ट लागेका केही पुस्तकहरु ?
बिपीको सुम्निमा , दीक्षितको माधवी , मैनालीको नासो , देवकोटाको साकुन्तल , टैगोरको गोरा र हेस्से को सिद्दार्थ ।
कुन समयमा धेरै पढ्नु भयो ?
काठमाडौमा मास्टर्स पढ्न जादा र वालिङमा क्याम्पस पढाएर बस्दा धेरै पढ्ने माैका मिल्याे ।
कस्ता पुस्तक हरु पढ्न रुचाउनुहुन्छ ?
विद्यार्थी जीवन सम्म फिक्सनका पुस्तकहरु धेरै पढिन्थ्यो । हाल आएर भने नन् फिक्सन विधाका पुस्तक मन पर्न थालेको छ । खासगरी इतिहास , भूगोल , राजनीति र धर्म संस्कृति सँग सम्बन्धित पुस्तक हरु अध्ययन गर्दछु । यसबाहेक चर्चामा आएका र पुरस्कार जितेका पुस्तक पनि पढ्ने गरेको छु ।
नयाँ पुस्तक हातमा परेपछि कसरी पढ्न शुरू गर्नुहुन्छ ?
नयाँ पुस्तक हातपरे पछि सबैभन्दा पहिले विषयसूची हेर्दछु । तत्पश्चात भूमिका र तस्बिर र अनुसूची हरु हेर्दछु । यति हेरी सक्दा पुस्तकले मोटामोटी आकर्षित गर्यो भने बल्ल पुस्तक पढ्न शुरू गर्दछु ।
कुन समयमा बढी पढ्नुहुन्छ ?
रातीको समयमा र बिदाको दिनहरूमा फुर्सद मिलाएर पढ्ने गर्दछु ।
पुस्तक छनौट कसरी गर्नुहुन्छ ?
पुस्तक छनौट को मुख्य आधार नै पुस्तक विवेचना हो । यसबाहेक प्रसिद्द लेखकहरु , चर्चित पुस्तकहरु र पुरस्कार विजेता पुस्तकहरु नै छनौटका आधार हुन् ।
पढ्ने बानी कहाबाट शुरुभयो ?
मेरो पढ्ने बानी स्कुले जीवन बाटै शुरू भएको हो । घरमा पिताजीको पुस्तकहरुको वृहद संकलन थियो । पिताजी नभएको बेला त्यहाँ भएका विविध पुस्तकहरु पढ्थे । थुप्रै पुस्तकहरु त बुझ्ने क्षमता नहुँदै पनि पढेर सके ।
नेपाली साहित्यको स्वर्णकाल भनेको देवकोटा , घिमिरे र सम को समय थियो । तत्पश्चात पनि गोविन्द बहादुर मल्ल , ध्रुवचन्द्र गौतम , शंकर कोइराला र भवानी भिक्षु र पारिजात जस्ता उत्कृष्ट लेखकहरु सक्रिय रहे । हाल आएर लेखनको क्षेत्रमा विविधता आउनुको साथै लेखनमा समावेशिता ( लेखक र विषयवस्तु दुवैमा ) विकास भएको छ । तर उपन्यासको क्षत्रमा आएको बाढीले अन्य गहन विधाका पुस्तकहरु आउन छाडेका छन् ।
नेपालमा पठनको संस्कृति र साहित्यको बाजार कस्तो रहेको छ ?
नेपालमा पठन संस्कृति तुलनात्मक रुपमा कमजोर रहेको छ । बजारहरुमा अत्यन्तै कम पुस्तकालय र पुस्तक पसल भए बाट पनि यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा शिक्षण पेशामा आबद्ध व्यक्तिहरुले नै खासै पुस्तक पढ्दैनन् । पछिल्ला दिनहरूमा भने प्रकाशन गृहहरुको आक्रामक शैलीले पुस्तक प्रकाशन र बिक्री बढेको देखिन्छ । विषेशगरी उपन्यास र आत्मपरक पुस्तक हरुको प्रकाशनमा वृद्धि भएको छ । तर पुस्तकको गुणस्तर भन्दा पनि विज्ञापन र बजार चर्चाले यसको बिक्री लाई निर्धारण गर्ने गरेको छ ।